breast – Healthy Life Journal
All posts tagged "breast"
၂၀၁၈ အိုလံပစ်နှင်းလျှောစီးအားကစား ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်
၊ ကိုထက် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ကစ်ကန်ရန်ဒေါဟာ သူ့မှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို...
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် သိခဲ့တဲ့ ကင်ဆာကို ကုသရင်း သမီးလေးကိုပါ မိခင်မေတ္တာအပြည့်ဖြင့် မွေးဖွားအောင်မြင်ခဲ့သူ မနန်းဝါ၀ါထို
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လတွင် ရင်သားကင်ဆာရောဂါရှိကြောင်း စတင်သိရှိခဲ့ရသည့် မန္တလေးမြို့တွင် နေထိုင်ရင်း မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ မနုဿဗေဒဌာန၊ သရုပ်ပြဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည့် အသက် ၃၂နှစ်အရွယ် မနန်းဝါ၀ါထို၏ အဖြစ်အပျက်က ဆန်းကြယ်လှသည်။ “ပထမကလေးနို့တိုက်တုန်းက ရင်သားမှာ အကျိတ်သေးသေးလေး ရှိနေတာကို သတိထားမိတယ်။...
ရင်သားကင်ဆာအဆင့်(၂) ကုသအောင်မြင်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ဆောင်နေသူ မသီတာခိုင်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) စွယ်တော်ရိပ် ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များပရဟိတ အဖွဲ့၏ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုတွင် မသီတာခိုင်ကို စတင်တွေ့ဆုံဖူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းရေးမှတ်ခြင်း၊ အလှူငွေလက်ခံခြင်းတို့ကို အားတက်သရော ဆောင်ရွက်နေသည့် မသီတာခိုင်ကို ကျန်းမာတက်ကြွသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်သာ ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရင်သားကင်ဆာကုသအောင်မြင်ထားသူဟု သိရသည့်အခိုက် အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။...
မေး. ကျွန်မအသက်က ၂၃နှစ်ပါ။ ဘယ်ဘက်ရင်သားမှာ အပေါ်ပိုင်းမှာ အကျိတ်ဖြစ်လို့ ခွဲရတာ နှစ်ခါရှိပါပြီရှင့်။ အခုလည်း အရင်တစ်ခါခွဲတာ တစ်နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး။ ထပ်ဖြစ်နေလို့ပါရှင်။ တစ်ခါတစ်ရံ နာပြီး ပူတယ်ရှင့်။ အရင်နှစ်ခါ ခွဲတုန်းကတော့ ရိုးရိုးအကျိတ်လို့ပြောပါတယ်။ ခဏခဏဖြစ်နေတော့ စိုးရိမ်လို့ပါ။ ဘာလို့...
ရင်သားကင်ဆာ အဖြေမှားကြောင့် သေဆုံးသူရာကျော်ရှိ
၊ ကိုထက် ၊ ရင်သားကင်ဆာလက္ခဏာများထဲတွင် ရင်သားအလုံးအကျိတ်တွေ့ရခြင်းနှင့် ရင်သားအရေပြားချိုင့်ဝင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သော်လည်း အခြားသတိပေးလက္ခဏာများကိုလည်း သိထားသင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ရင်သားကင်ဆာ အဖြေမှားကြောင့် အမျိုးသမီး ရာနှင့်ချီပြီး သေဆုံးမှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းအရ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက အသက် ၆၈ နှစ်မှ...
HER2အမျိုးအစား ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး-ရွှေရောင်နှင်းဆီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ HER2Positive ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းက များပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ နိုင်ငံတကာစစ်တမ်းတွေအရ HER2Positive ရင်သားကင်ဆာလူနာတွေက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားသူအားလုံးရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံပဲ...
ကင်ဆာကြောင့် ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးဖြတ်ထုတ်ခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စာမေးပွဲ ကောင်းစွာဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသူ
၊ ကိုထက် ၊ မိုင်လီပလစ်စာ ၁၅နှစ်အရွယ်မှာ မိခင်ဖြစ်သူက ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်မှာ ရင်သားမှာ အကျိတ်လေးတစ်ခုစမ်းမိခဲ့ပြီး ရင်သားကင်ဆာမျိုးရိုးရှိလို့ ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းသွားရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေအရ ကံကောင်းစွာနဲ့ သူ့ရင်သားအကျိတ်ဟာ ကင်ဆာအကျိတ်မဟုတ်ဘဲ ရိုးရိုးအဆီကျိတ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့...
ရင်သားကင်ဆာအဆင့်(၃) အနိုင်ယူကျော်လွှားခဲ့တာ ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်ရီရီ၊
ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၁၉၈၆ ခုနစ်တွင် အစိုးရ၀န်ထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တာဝန်ကျသည့် နေရာများ သို့ လိုက်ရင်း ဒေါ်ခင်ရီရီသည် အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဘယ်ဘက်ရင်သား၌ အကျိတ်လေးတစ်ခုကို စတင် စမ်းမိခဲ့သည်။...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ရင်သားတွဲကျတာက ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အ၀လွန်တာ၊ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးတာ၊ သွေးဆုံးတာ စတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ရင်သားတွဲကျတတ်ပါတယ်။ ရင်သားတွဲကျတဲ့အခါ အလှပျက်မှာစိုးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အလွယ်တကူကုသနိုင်တဲ့ ကုထုံးတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ – လေ့ကျင့်ခန်း ရင်သားမတွဲကျစေဖို့...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ အတွင်းရေးမှူး-ရွှေရောင် နှင်းဆီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အမျိုးသမီးတွေမှာ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သား အကျိတ်တွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. မိန်းကလေးတွေမှာ အပျိုဖော်ဝင်တဲ့အရွယ်က စပြီး ရင်သားကကြီးထွားလာပါတယ်။ ရင်သားထဲမှာ ရှိတဲ့ နို့ရည်ဂလင်းတွေကြီးလာသလို အဆီဂလင်း တွေကလည်း...